भानु जयन्तीमा रक्तदानसहित रामायण वाचन::Hamrodamak.com
भानु जयन्तीमा रक्तदानसहित रामायण वाचन
दमक,२९ असार/ २०५ औं भानु जयन्तीको अवसर पारेर शुक्रवार दमकमा रक्तदानसहित प्रतियोगितात्मक रामायण वाचन साहित्यीक कार्यक्रम गरिएको छ ।
दुई चरणमा आयोजित सो कार्यक्रमको विहान रक्तदान सम्पन्न भएको थियो भने दिउँँसो रामायण वाचनसहित साहित्यीक कार्यक्रम गरिएको थियो । रक्तदानमा १५ महिलासहित ३४ जनाले रगतदान गरेको नेपाल स्वमसेवी रक्तदाता समाज झापाका अध्यक्ष सिताराम खतिवडाले बताए । आयोजक संस्था रक्तदाता समाजका उपाध्यक्ष कमल घिमीरे रगतदान गरेर रक्तदानको शुभारम्भ गरिएको थियो ।
रक्तदानमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रक्तसञ्चार सेवा दमकको प्राविधिक सहयोगमा भएको थियो ।
कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन राईको प्रमुख आतिथ्यता तथा दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओली,उपप्रमुख गीता अधिकारीको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । रक्तदानमा दमक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सीना, १०३ पटक रगतदान गर्ने राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरि दिउसो नै रामायण वाचन प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो ।
दमक–५ स्थित ज्येष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा भएको सो कार्यक्रममा एक दर्जन बढीले रामायण वाचन तथा अन्य श्रष्टाहरुले साहित्यीक रचना पाठ गरेका आयोजक संस्था साहित्यकला संगमका अध्यक्ष नगरपति पाण्डेले बताए । दुवै कार्यक्रम साहित्यकला,रक्तदाता समाज,ज्येठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान,घरबहाल उपभोक्ता हकहित संघ,पताञ्जली योग समिति झापाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
शुक्र, असार २९, २०७५ मा प्रकाशित
मोटरसाइकलको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु
झापा,११ चैत । मोटरसाइकलको ठक्करबाट झापाको बुद्धशान्तिमा एक जना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बुद्धशान्ति गाउँपालिका ३ बस्ने ३२ वर्षीय जीतकुमार राई रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी...
दमक नगरपालिकाको नवनिर्मीत भवन उद्घाटन गरिदै
दमक,१० चैत । दमक नगरपालिकाको थप नयाँ कार्यालय भवन निर्माण पूरा भएको छ । दुई वर्ष अघि निर्माण शुरु भएको सुविधासम्पन्न तीन तले प्रशासनिक भवन एकसाता पछि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नवनिर्मीत भवनको लागत...
सवारी दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
काकड्भिटटा,१० चैत । झापाको मेचीनगर १२ खरेडागी स्थित मेची राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा परेर आज एक जना मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । उत्तरबाट दक्षिण तर्फ आउदै गरेको मे १ ह ५३१० नं.को टेम्पोले बाटो काट्न...
दूधेमा आगोलागी हुदाँ करिव रु ७ लाखको क्षति
दुधे, १० चैत । झापाको शिवसताक्षी –११ स्थित दूधेका भगीरथ शिवाकोटीको दूईतले काठको घरमा आगोलागी हुदाँ करिव ७ लाख मूल्य वढीको क्षति भएको छ । दिउँसो १:३० बजे घरमा कोहि नभएको अवस्थामा अचानक आगलागी हुदाँ...
माइक्रोबसले ठक्कर दिँदा बालकको मृत्यु
उर्लाबारी,१० चैत । माइक्रोबसको ठक्करबाट मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आइतबार बिहान एक जना बालकको मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख ३५४ नंको माइक्रोबस अनियन्त्रित भई सडक किनारको रुखमा...
भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान सतासीको नेतृत्व
दूधे ९ चैत्र । यहाँस्थित भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान सतासी–शिवगञ्ज शाखाको नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ । शनिबार शिवसताक्षीको दूधेमा वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवशनबाट दुर्गाप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको...
विप्लव समूहका आठजना पक्राउ
काभ्रे,९ चैत । नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, विशेष ब्यूरो र काभ्रे प्रहरीको संयुक्त टोलीले गएराति काभ्रेको काफलडाँडाबाट ओलीसहित आठ जनालाई...
दुबईमा तीन वटा ट्राभल एजेन्सीहरु मर्ज
यूएई, ९ चैत । यूएईको नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक व्यापार गरिरहेका तीन लोकप्रिय नेपाली ट्राभलहरु मर्ज भएका छन् । दुबईमा नेपालीले सञ्चालन गरेका तीन वटा ट्राभल एजेन्सी एउटै भएर कारोबार गर्न सहमत भएका हुन्...
दमकमा हुने वृहत वाङ्मय संगोष्ठीको तयारी तीव्र
दमक,१० चैत । झापाको दमकमा यहि चैत १७ देखि १९ सम्म हुने त्रिदिवसीय वृहत वाङ्मय संगोष्ठीको तयारी तीव्र पारिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
झापा,१० चैत । यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई )देशैभरी सुरु भएको छ । आजआइतबार बाट सुरु हुने परीक्षामा कुल चार लाख ७५ हजार
– तीर्थ तिम्सिना एकैछिन् एकाघ्र भएर सोच्नुहोस् त, तपाईंको एउटा हातको औंलाको मूल्य कति होला ? एक लाख, दुईलाख या पाँच लाख ? के तपाईं
स्थानीय युवाहरुको सहकार्यमा खुल्ने भयो दमकमा क्रिकेट एकेडेमी, निर्माणकार्य तिब्र
दमक । झापाको दमकमा क्रिकेट एकेडेमी खुल्ने भएको छ। गत सोमबार एक कार्यक्रमका बिच क्रिकेट एकेडेमीको शिलान्यास भएको छ। उक्त एकेडेमीको नाम Patriotic Cricket Training
गौरादह खानेपानीमा देखियो संसदीय चुनावको झझल्को
गौरादह,६ चैत । यहाँस्थित गौरादह खानेपानी तथा सरसफाई समितिको आगामी चैत्र १६ गते निर्वाचन को माहौल तातिएको छ । नेतृत्व हडप्न दलीय प्रतिष्पधाले आम